juillet 22, 2019 adminJeuxLeave a Comment on TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF
Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny. Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny. Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Inona ary no homeko anao? Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany.
Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Izaho no Andriamanitra Tsitoha; maroa fara sy mihabetsaha; firenena maro no hiseho avy prf, ary hisy mpanjaka amin’ny haterakao; 12 ary ny tany izay nomeko an’i Abrahama sy Isaka dia homeko biaboly ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany. Ahoana no anaovanao izany? Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Fandrao maty aho noho ny aminy. Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Iza moa ireto miaraka aminao ireto?
Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada malagay lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao. Fa izao dia efa nanao adaladala ianao.
Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama. Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo.
Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. Inona izao nataonao izao?
Iza moa ireto miaraka aminao ireto? Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Ario ireo andriamani-kafa, izay ao aminareo, dia madiova, sady ovay ny fitafianareo; 3 ary andeha hiainga isika ka hiakatra any Betela; ary hanao alitara any aho ho an’Andriamanitra, Izay nihaino ahy tamin’ny andron’ny fahoriako ary nomba ahy tamin’ny lalana izay nalehako.
Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao.
Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona? Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano.
Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.
Tsy nihomehy aho tsy akory. Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika.
Izany no Esao, rain’ny Edomita. Dia neken’i Abrama ny tenin’i Saray.
Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala. Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.
Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany.
Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Alao io zazavavy io ho vadiko.
Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay pvf na mikisaka amin’ny tany.